Izifundo - Bilingual Education Institute
Ikhaya IsiNgisi Sababaleki, Ama-Asyl, SIV, kanye Nezisulu ZokushushumbisaIzifundo
Izifundo Zolimi lwesiNgisi
IsiZulu njengolimi lwesibili
Amakilasi e-ESL agxile kumakhono olimi okusinda. Amakilasi ethu afundisa amakhono olimi ayisisekelo okukhuluma, okulalela, okufunda nokubhala. Sinezigaba zesiNgisi zawo wonke amazinga kusuka ekuqaleni kokuqala kuya phambili.
Le khosi yenzelwe abafundi abanolwazi oluncane noma oluncane lwesiNgisi. Abafundi bazofunda izinhlamvu zamagama, ukuqashelwa kwezinombolo, amagama okubuka kanye nemisindvo.
Kubafundi abanamashejuli angajwayelekile noma abahamba kude, i-BEI inamakilasi okuzenzela we-inthanethi wezitshudeni ukuthi zifunde isiNgisi noma kuphi noma nini. Amakilasi anikezwa ngokusebenzisana kwethu neBurlington English.
Amakilasi esiNgisi afundiswa ngendlela yeHybrid anikeza ukufundwa kuzo zombili izifundo eziku-inthanethi nasebusweni. Le mfundo yinhle yabafundi abathanda ukufundiswa nokuzilolonga nokuzilolonga nomyaleli kanye nabanye abafundi.
Ukuqeqeshwa Kweqembu Elincane
Le khosi ilungele amaqembu amancane anezinjongo ezifanayo zokufunda ulimi futhi adinga ukusebenza ngezinhloso ezithile zolimi.
Amakilasi Onke Nabo
I-BEI inikeza imfundo yangasese yomfundi onamakhono akhawulelwe angenza kube nzima ukubamba iqhaza ekilasini leqembu. Amandla akhawulelwe angafaka, kepha awakhawulelwe kumbono ophansi, ukungaboni kahle nezinkinga zokuhamba.
IsiNgisi Ngezifundo Eziqondile Zezinhloso
Amakhono Empilo IsiNgisi
Lezi zifundo zethula njengababaleki abasanda kufika emisebenzini yomphakathi waseMelika. Abafundi bazojwayela imikhakha ehlukene yomphakathi wangakithi nesiNgisi esidingekayo ukuze siphumelele. Izindikimba ezidumile zezifundo zifaka i-Financial Literacy, Literacy Healthcare, kanye nokuqonda uhlelo lwe-US Education.
Lezi zifundo zinikezela ngamakhono esiNgisi emikhakheni ethile yemisebenzi. Abafundi kulezi zifundo bangaba nokuhlangenwe nakho kwangaphambilini kulezo zinsimu noma bangaba nentshisekelo yokufaka leyo nkambu yomsebenzi. Izindikimba ezidumile zezifundo zifaka i-Medical English, i-English ye-Information Technology kanye nesiNgisi sabaqondisi bezokuphatha.
Le khosi yenzelwe abaqashi abanenani eliphakeme lababaleki abaqashiwe. Amakilasi ajwayele ukusebenzela futhi ahlanganise amakhono ayisisekelo okusinda esiNgisi nesilulumagama esithile nemishwana ethile.
Okuqukethwe okukhethekile kwesiNgisi
Izidingo ezithile zomphakathi wababaleki waseHouston zinganquma ukuthi amakilasi esiNgisi ngezinhloso ezithile ayadingeka ukukhuthaza ukuzethemba nokuzanelisa ezindaweni ezinjengeNgxoxo, Ukubhala, njll.